Semalt: I-Grepsr - I-Platform esebenzayo ye-Chrome Extension Platform
I-Grepsr iyinqamlezo elinqabileyo nelinen elula, apho abasebenzisi banokuqokelela nokuhlela idatha evela kumnatha. Ijolise kubasebenzisi abangenalo lobugcisa abazimisele ukuhlawula i-premium ukwenzela ukuba idatha yabo idityaniswe kwaye ihlelwe ngendlela ehlelwe kakuhle. Isixhobo sokukhutshwa kwewebhu sinika izibonelelo ezilandelayo kubasebenzisi balo:
Gcina ixesha kunye namandla
Abasebenzisi banokukhipha inamba yedatha kumaphepha ahlukeneyo ewebhu ngaphandle kokusebenzisa ubunzima zixhobo ze software. Bamele baqulunqe ikhalenda yabo rhoqo ukuba benze imisebenzi. Inkqubo elula yokwenza isofthiwe kunye ne-user-friendly interface eqondakalayo kubasebenzisi bezobugcisa. Namhlanje abathengi abaninzi basebenzisa eli qonga ukwenza iziphumo ezintle kwiinkampani zabo. I-Grepsr iqinisekisiwe ukuba iwanike idatha efanelekileyo naluphi na ayidingayo.
Sebenzisa izixhobo ezisebenzayo kunye nemisebenzi ezenzekelayo
iGripsr isebenzisa izixhobo ezithile ezimangalisayo, kunye nenkxaso enkulu kunye nokudibanisa. Ngenxa yoko, inikeza iplati elula kubasebenzisi bayo, abafuna ukusebenzisa izixhobo ezikhethekileyo ukuba bakhiphe phantse nayiphi na into evela kumnatha. Ngokomzekelo, le projekthi isebenza ngeenkcukacha zeB2B, njengamaxabiso emveliso, uluhlu lwamasheya, amagama, kwakunye noqhagamshelwano loshishino.
Ukunikezela ngabasebenzisi ngeqela elixhasayo elimangalisayo
Akusoloko kuyinto elula kubaphandi bewebhu ukususa yonke idatha abayifunayo. Ngokomzekelo, ukuba bazama ukuqokelela amanani eesitokethi ezithile kumakhasi ewebhu kunye newebhusayithi iguqula isakhiwo sayo, ukusekwa kwabo kweso sithuba kufuna ukuhlaziya. Lo ngumsebenzi onokwenziwa yiengcali zeGrespr ezingenayo imali eyongezelelweyo.
Ngubani osebenzisa le nkqubo ye-Software Scraping Software
Kukho inani leenkampani kwiimarike ezifuna ukufumana nokuhlela idatha yabo yewebhu, njengama-arhente amakhulu kunye nabathengisi. Bobabini bafuna idatha yokukhuphisana rhoqo kunye neengcali ze-Grepsr zingabancedisa. Ngaphezu koko, iifom ezincinci zingaphinda zifune uncedo ukukopisha nokunamathisela idatha kwiwebhu ngokuzenzekelayo.
Yenza iiprojekthi nge Grepsr
Xa abasebenzisi benza iprojekthi ethile, esi siqendu sesicatshulwa sibuye sibuye sibuyele kubasebenzisi isicatshulwa esikhethekileyo (intengo). Emva kokuba ixabiso lisetyenziswe, i-extractor yedatha iyadalwa, kwaye inkqubo yokuqokelela idatha iqala. Abaphandi bewebhu baziswa ngabachwephezi be-Grepsr ngezaziso ze-app okanye i-imeyile.
Esi siqalo sesisitoreji sesisitoreji sisebenzisa ukubetha kwebakala, ngoko abasebenzisi banokuqiniseka ukuba yonke inkcazelo yabo iphephile. Ngaphezu koko, kufuneka baqonde ukuba nayiphi na ixesha abayifunayo, banokulawula ngokupheleleyo idatha yabo Source .